Guddi loo xilsaaray taakuleynta dadkii ku dhaawacmay qarixii Muqdisho - BBC News Somali
Weli ma jiro cadeyn rasmi ah oo la xiriirta sababta qaraxa, balse waxaa jiro warar iskhilaafsan oo ku saabsan qaabka uu qaraxa ahaa.
Qaraxa waxaa ku dhintay lix qof oo ay ka mid yihiin guddoomiyayaal, Agaasimayaal iyo dadkale oo katirsanaa maamulka gobolka Bnaadir, Sidaas waxaa BBC u sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay lix qof oo uu ka mid yahay guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
Gudoomiye Yariisow waxaa lagu daweynayaa cisbitaalkaa Erdogan oo horey la oran jiray Digfeer. Waxaa ilo ku dhow maamulka ay sheegeen in laba qalliin lagu sameeyay, ayna suuragal tahay in dalka dibaddiisa loo qaado.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka, waxayna tilmaameen in bartilmaameedka uu ahaa Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
Waxyar ka hor qaraxa ayuu sarkaalka u dhashay Mareykanka ka baxay dhismaha Maamulka Gobolka Banaadir.
Tobannaan qof oo looga shakisan yahay Al-Shabaab oo Muqdisho lagu qabtay
Makhaayadaha Liido oo lagu amray inaysan furnaan wixii ka dambeeya saqda dhexe
Xarunta gobolka Banaadir waxay ka mid tahay xarumaha dowladda ee sida weyn ammaankooda loo adkeeyo.
Waa arrin aad u yar in Al-Shabaab ay isqarxin u adeegsadaan qof dumar ah. Welina macadda waxa sababay in "si fudud" ay ku gasho gudaha xilli uu socday shir amniga ku saabsan.
Qaraxan wuxuu imaanayaa ka dib labo maalmood ka hor oo qarax ka dhacay barkoontorool oo ku taalla KM4, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof.
Sidoo kale, horraantii bishan ayay Al-Shabaab weerareen huteel ku yaalla Kismaayo oo ay ku dileen 26 qof.
"Shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegeynaa wax cad weeye inaan dagaal kula jirno waxa uu ugu yeeray argagixisada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee la duufsaday dagaal kula jirno, shacabka Soomaaliyeedna waxaan leennahay dagaalkaasi lagu hayo argagixisada iney ku gacan siiyaan dowladda" ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo BBC u warramay.